၁၀ တန်းနှစ်ကသွေးတိုးရောဂါဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ကျန်တာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး ခုတော့ | D Daily News
Home News ၁၀ တန်းနှစ်ကသွေးတိုးရောဂါဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ကျန်တာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး ခုတော့
၁၀ တန်းနှစ်ကသွေးတိုးရောဂါဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ကျန်တာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး ခုတော့
အသက်- ၂၆ နှစ်
ကျွန်တော်ငယ်ငယ် ( ၁၀ )တန်းနှစ်ကသွေးတိုးရောဂါဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ကျန်တာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး
၄..၂ ..၂၁ ရက်နေ့ညမှာလေဖြတ်သလိုဖြစ်သွားလို့မင်းဘူးမြို့ဆေးရုံတက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့်အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရလို့ပြန်ခဲ့ရတယ်
ကျောက်ကပ် ၂ ဘက်လုံးမှာ ၈% ပဲကောင်းတယ်လို့သိရချိန်ကျွန်တော်အရမ်းကြောက်သွားတယ်ဝမ်းလည်းအရမ်းနည်းခဲ့တယ်မကွေးတိုင်းဆေးရုံကျောက်ကပ်သမားတော်ကြီးနဲ့ပြောင်းကုခဲ့ရတယ်
ကျွန်တော့်ကျောက်ကပ်ကဆေးမှအသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်မယ်လဲနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ မဆေးရင်တော့ စိတ်မချရဘူးလို့ဆရာကြီးကပြောတော့ ချို့တဲ့တဲ့မိဘတွေကိုသနားလို့ မဆေးတော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်​
ကျောက်ကပ်ကလည်းတပတ်ကို ၃ ကြိမ်ဆေးရဖို့တဲ့ ကျောက်ကပ်ဆေးဖို့ ကျောက်ကပ်လဲဖို့ဆိုတာနေပါအုံး ခုကျွန်တော်ဆေးထိုး/ ဆေးသောက်လုပ်နေရတဲ့ဆေးဖိုးစရိတ်ကကို တစ်လကို ( ၄ သိန်းနဲ့ ၅ သိန်း) ကြားမှာရှိနေတော့ကျောက်ကပ်ဆေးဖို့ရာ စိတ်မကူးနိုင်ခဲ့ဘူး ဆေးထိုးဆေးသောက်လုပ်နေရင်း ၁. ၆. ၂၁ ကစပြီးဆီးမထွက်တော့ဘူး ဆီးဆေးတွေထိုးလည်း မသွားဘူး အာ့အချိန်မှာ အရမ်းပင်ပမ်းတယ် မောတယ် အရမ်းကြပ်တယ်
လုံးဝမသက်သာလို့ နေပြည်တော် ကုတင်( ၁၀၀၀) ဆေးရုံမှာတက်ရောက်ကုသခဲ့တယ် ဆရာဝန်ကြီးတွေကတော့ ကျွန်တော့အသက်ငယ်သေးလို့ ဆေးဖို့ကိုတိုက်တွန်းတယ် မဆေးရင်တော့ ၁ လ ၂ လပဲတဲ့ကိုဗစ်တွေအရမ်းဖြစ်နေလို့ ဆေးရုံဆင်းပြီးပြန်ခဲ့ရတယ်
ကျွန်တော်အလှူမခံပါဘူးခုတော့ကျွန်တော်အလှူခံမှရတော့မှာမို့ပါ ကျွန်တော့မိဘတွေအရမ်းပမ်းနေကြပြီ ခုလိုခက်ခဲနေကြတဲ့ခေတ် ကြီးမှာယုံကြည်ပြီးလှူပေးကြလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ခုထိကျွန်တော့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးထါးတဲ့ကျွန်တော့ကံတရားရယ်ချို့တဲ့နေတဲ့ကြားကမျက်နှာတချက်မညှိုးဘဲခုချိန်ထိဆေးကုပေးနေတဲ့အဖေနဲ့အမေရယ် ချီးသေးကအစမရွံမရှာလုပ်ပေးတဲ့အကိုအမနဲ့ညီလေးတွေရယ် စိတ်ခွန်အားတွေပေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အဒေါ်အမတွေရယ်ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မသက်သာတဲ့အချိန်တိုင်း( ညဥ့်နက်သန်းခေါင်) ခေါ်လည်းမညည်းမညူ အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ကုသပေးနေတဲ့ရွာကဆရာ( ဒေါက်တာရှိမ်းဝေထက်ကို) ကိုလည်းအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော့ဆေးဖိုးတွေမနိုင်တော့လို့လိုင်းပေါ်တင်အကူအညီတောင်းခံချိန်ကူညီပေးကြတဲ့ရပ်ဝေးရပ်နီးမြန်မာတပြည်လုံးကအလှူရှင်တွေ ဆရာသမားတွေအကိုအမတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ လောကကြီးထဲမှာ ကျွန်တော့ကို အသက်ဆက်ရှင်ခွင့်ရအောင်အဖက်ဖက်က ကူညီပေးနေကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အလိမ်အညာမဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ်ဖြစ်လို့ အလှူခံနေရတာမို့ဆက်ပြီးလည်း အလှူခံခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ
စာတွေ reply. ပြန်လို့ရအောင် post တွေတင်လို့ရအောင်ကူညီပြီးစာရိုက်ပေးတဲ့အမလည်းကျေးဇူးပါဗျာ
မှတ်ချက်။ ။ ယခုလိုအသည်းအသန်အလှူခံနေရခြင်းမှာ ၈ လပိုင်းထဲတွင် ရန်ကုန်၌ဆေးကုသမှု့ခံယူရန်စီစဥ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Kpay no 09794392436
Kbz acc no- 180-301-18000611101
Kbz acc name – SAN MIN THAW
အလှူရှင်များအားလုံး ဘေးခပ်သိမ်း၊ ရန်ခပ်သိမ်း၊ အန္တရာယ်ခပ်သိမ်း ကင်းရှင်းကြပါစေခင်ဗျာ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Previous articleသင်မကူညီနိုင်ရင်တောင် ရှယ်ပေးပါ ခွဲစိတ်ကုသမှုမလုပ်ပါက မျက်စိပါကွယ်ရတော့မယ့် သားလေးပါ
Next articleအနောက်နိုင်ငံကြီးများက အသိအမှတ်မပြုသည့် Save မဖြစ်တဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေလိုက်၀ယ်နေတဲ့မအလ